Ọchịchọ ịmata ihe nke China | Akụkọ Njem
China Taa bụ otu n'ime mba kachasị mma n'ụwa. Ọ bụghị na ọ bụghị na mbụ, mana ruo ogologo oge anyị amachaghị banyere nnukwu obodo a nke na-achọ ịzụlite. Taa, ọnọdụ ahụ dị iche na ụwa na-agba mbọ ịzụ ahịa na China mgbe ụmụ amaala ya jupụtara na njem nleta niile nke Old Europe na America.
China bu uwa n'onwe ya, mana ole ka anyi mara banyere obodo a di uku na Asia? Taa, ịmata ihe nke China.
2 Ọchịchọ nke China
Maka ọtụtụ, China bụ mba kachasị adọrọ mmasị n'ụwa. Ọ bụ mba nke atọ kachasị na mbara ala na nke nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị bi na ya. Ọzọkwa, gafee oke na mgbada na akụkọ ntolite ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya Ọ bụ otu n'ime obodo ndị kacha dịrị ogologo ndụ n’ime ihe niile ụwa anyị nwetara.
Site na ịbụ obodo azụ na agrarian, nke jikọtara na ala ala, ọ ghọla otu mba na-eto ngwa ngwa ma na-emepe emepe n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya. Enwebeghị onwe ya ma lie ọtụtụ puku afọ nke ndị eze ukwu, ndị mandarin na ndị mọnk e liri mgbe otu agha obodo kacha sie ike mmadụ nwere ike ịta ahụhụ.
Taa, aha ya bụ Ndị mmadụ Republic of China ma nwee nsọpụrụ nke ịbụ akụkụ nke otu ndị ahọpụtara: ọ bụ otu n'ime Ọdịbendị Oge Anọ nke ụwa tinyere ndị Babilọn, Mayans na ndị Ijipt. Akụkọ ihe mere eme na-agwa anyị na nke mbụ jikọrọ ókèala ndị China eze ukwu, Qin, bụ onye a hụrụ ili ya ma gwupụtala ya kemgbe ọtụtụ iri afọ. Emechara ga-abịa usoro ndị eze ndị ọzọ a maara dịka Han, Tang, Yuan, Ming ndien ke akpatre, akpatre, emi Ndị eze Qing.
Mgbe ogologo oge nke ndị eze ukwu gasịrị, na mmalite nke narị afọ nke XNUMX, nnukwu agha obodo, ruo mgbe na 1949 ndị mmadụ Republic of China e hiwere ụlọ ikpe ndị Kọmunist na n'aka Mao Zedong. Mgbe e mesịrị, ndozigharị malitere mgbe ọ nwụsịrị site na denx xiaoping ha tọrọ ntọala nke ọkara-ọchịchị Kọmunist a, ọkara onye isi obodo China anyị niile maara.
China nwere 9.6 nde square kilomita o bukwara ibu. A) Ee, ala ya dị iche iche n’ihi na e nwere ugwu, na mbara ọzara, ala ịkpa, ala ahịhịa, na ugwu nta. China bu ebe obibi kachasi elu na uwa: a Ugwu Everest nke nwere mita 8.848 dị elu, mana n'otu oge ahụ ọ nwere nkụda mmụọ kachasị ala nke atọ n'ụwa, Turpan Depression nke na-erughị mita 154.
Banyere ókè China bụ mba nwere oke ala mba ụwa niileO nwere ha na mba iri na anọ, Mongolia, Tajikstan, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Pakistan, Nepal, India, Myanmar, Bhutan, Vietnam, Thailand na North Korea. O doro anya na kọntaktị ọ bụla enweela mmetụta ya.
Na ndị dị otú ahụ nke na mgbakwunye na Okirikiri oke nwere otutu ugwu. Ọ bụ ezie na ọ na-ajụ oyi n’ebe ugwu karịa n’ebe ndịda, ebe ọdịda anyanwụ ka mmiri karịa ebe ọwụwa anyanwụ. N'ebe ugwu okpomọkụ nwere ike ịbụ -40ºC mana na ndịda, n'oge ọkọchị, temometa nwekwara ike ịrị elu 40ºC nke hel. Otu ihe ahụ na mmiri ozuzo, na ndịda ọwụwa anyanwụ ọ na-ezo ọtụtụ, ikekwe ruo mita 3, ebe n'ọzara naanị obere millimeters na otu afọ.
Mgbe m bụ nwatakịrị, China bụ mba mechiri emechi, ọtụtụ puku ndị mmadụ na-agba ịnyịnya ígwè na uwe na-acha anụnụ anụnụ. Nke nta nke nta, n’ime afọ 30 gara aga, postkaadị agbanweela. Taa ọ bụ otu n'ime akụ na ụba ụwa na-eto ngwa ngwa, na-eto na gburugburu 10% kwa afọ. A maara ya dị ka «ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ụwa"na bụ onye na-ebute uwe, ihe eji egwuri egwu, fatịlaịza, ihe na ígwè nke uwa dum.
O doro anya na mmepe a bịara ọtụtụ aka mmetọ gburugburu ebe obibi, na akụkụ nke ụfọdụ emeela ka ọ kwe omume site na enweghị ndị ọrụ ọrụ. Obere ugwo ugwo na ikike oru aka ole na ole dika odi nma maka mmepe. Ọ bụ ezie na n’ọnọdụ ego ole na ole mba ndị mepere emepe taa ga-anabata.
Ọganihu akụ na ụba a ewetawo nnukwu mgbanwe mmadụ. Na ụkpụrụ, a na-eto eto obodo ebe ọ bụ na ọ gbakọọ na Ihe dị ka narị nde mmadụ atọ esila n’ime ime obodo kwaga obodo ukwu n’ime iri atọ gara aga. Yabụ, enwere megacities Ma ka omume a na-aga n'ihu, gọọmentị nwere ike ihu nsogbu ndị ọzọ (agụmakwụkwọ, ahụike, mmepe obodo, ọrụ).
Ezinụlọ na-ekewapụ onwe ha, ndị nne na nna na-aga obodo maka ọrụ ma ha enweghị ike ịkpọta ụmụ ha, ndị ahapụrụ ka nne na nna ha ochie na-elekọta. Ma obu ha nara ha mana mgbe ahu ha apughi idebanye aha ha na adreesị ohuru ma ha enweghi usoro ogwu ... udi ihe a. Ihe a niile na-egosi nnukwu nsogbu maka gọọmentị China, enweghị obi abụọ.
Na mgbakwunye, ndị China, ọ bụ ezie na n'anya ndị mba ọzọ, ọ nwere ike iyi ka ọ na-emekọ ihe ọnụ, ọ bụghị otu a. China nwere agbụrụ iri ise na isii, onye nke ọ bụla nwere ọdịnala ọdịnala ya, oge ụfọdụ asụsụ ya na mgbe ụfọdụ usoro ederede ya. Ọ bụ eziokwu na ndị ka n'ọnụ ọgụgụ bụ Han, ihe kariri 91% nke onu ogugu ndi mmadu, mana Manchu, Hui ma obu Miao nwekwara otutu ndi mmadu.
Agbụrụ ndị a bi na mpaghara ụfọdụ nke mba ahụ, n'ihi ya, a ghaghị ịmepụta usoro iwu ga-edozi ha. Iji maa atụ, na Uygur enwere otu ndị Alakụba na n'afọ ndị na-adịbeghị anya ọ bụrụla ebe esemokwu dị n'etiti gọọmentị etiti.
Kedu ka otu nnukwu obodo dị iche iche si dị n'otu? Nkeji site na usoro agụmakwụkwọ, dị ka mgbe niile. Agbanyeghị na China nwere ọtụtụ asụsụ, ọ bụ n'eziokwu, ọ bụ mmalite nke naanị usoro ide ihe osise fọdụrụ n'ụwa, asụsụ gọọmentị bụ asụsụ Mandarin. A na-akuzi asụsụ Mandarin n’ụlọ akwụkwọ niile na nke nta nke nta ọ na-ewepụ asụsụ ndị ọzọ a ma ama, dị ka Cantonese.
A na-asụ Cantonese na Hong Kong, Macao, Guangxi ma ọ bụ Guandong, dịka ọmụmaatụ, mana na mpaghara Shaghai ma ọ bụ Zhejiang a na-asụ olulu Wu, nke dị iche na Mandarin ... agbanyeghị, asụsụ Chinese nwere ike ịbụ asụsụ a kacha asụ na ụwa n'ọtụtụ ndị bi na ya ma obi abụọ adịghị ya Ọ bụ otu n'ime ihe siri ike mụta ịmụta ozugbo.
Na ọtụtụ ndị mmadụ na ọtụtụ asụsụ na ọtụtụ omenala, ọbụlagodi mgbe anyị chere na ndị China na-efe otu okpukpe, ọ dịghị otu ahụ. N'ezie, okpukperechi bu okwu a kpagburu ndi Communist. Ma ọbụghị maọbụ taa enweghị otu okpukperechi na ndị China na-ekwupụta site na-ekweghị na Chineke na otu Shintoism, na-agafe na Confucianism, Buddha, Taoism, Islam ma ọ bụ ọbụna Iso Christianityzọ Kraịst.
Ruo oge ụfọdụ, China etinyela ego dị ukwuu iji mepụta sistemụ njem njem ya. Mba nke na-acho inwe ikike aghaghi ijiko nke oma. Yabụ, ịgbaso nzọụkwụ Japan, Gbọ oloko China na-efegharị n’obodo niile. Transportgbọ njem a bụ ihe na-eme ka ndị njem nleta taa mata ọmarịcha ya. Na ee, China nwere nnukwu akụ ndị njem nleta.
M na-ekwu nke Nnukwu Mgbidi, ndị dike Terracotta, ọmarịcha obodo machibidoro iwu, Guilin, Osimiri Yangtze na Ugwu Yellow, pandas Sichuan, ụsọ mmiri Sanya, ndị jupụtara na skyscrapers nke Hong Kong, mma nke Shanghai ... Na gastronomy!
Ma anyị malitere isiokwu a na-ekwu banyere ya ịmata ihe nke China yabụ na anyị agaghị ahapụ ịhapụ ịhapụ data ndị a: e mepụtara kitesi iche na China, ihe karịrị puku afọ atọ gara aga n'eziokwu, jiri silk na achara; Ọzọkwa ha mepụtara bọl puku afọ abụọ gara aga na Han Dynasty oge iji nwee obi ụtọ n'ụlọ ikpe eze.
A mụrụ gunpowder na China, otu ihe ka oku, China na-arụpụta ihe dị ka 85% nke ihe ọkụkụ ụwa. Marketsfọdụ ahịa na Beijing na-ere nri dị iche iche dị egwu, dịka ọmụmaatụ akpị nke na-arapara na ezé ezé, na-adị ndụ, ma na-eghe mmanụ, n'etiti ụmụ ahụhụ ndị ọzọ.
Ọzọkwa, e ji osikapa eji eme ihe na nnukwu mgbidi nnyapadeỌ bụrụ na ijikọ ụzọ ụgbọ okporo ígwè niile na China ị nwere ike ịgagharị gburugburu ụwa ugboro abụọ, a na-echepụta mkpụrụ osisi chopịstị 5 puku afọ gara aga ma anaghị eji ya eri kama maka isi nri, n'agbanyeghị na mba ahụ buru ibu nwere naanị otu oge ọrụ (United States nwere anọ), ọkara nke ezì nile dị n'ụwa bi na China (ha rie ha) ...
Yabụ na anyị nwere ike ịga n'ihu na ndepụta anyị mara mma na ịmata ihe nke China mana echere m na ọ ka mma ịga lee ihe niile n'onwe anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » China » Ọchịchọ nke China